Kooxda Al-Shabaab oo weerar ka geesatay Saldhig ay leeyihiin Ciidanka Kenya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Kooxda Al-Shabaab oo weerar ka geesatay Saldhig ay leeyihiin Ciidanka Kenya
Kooxda Al-Shabaab oo weerar ka geesatay Saldhig ay leeyihiin Ciidanka Kenya
Xubno la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa weerar khasaaro dhaliyey ay ka geysteen deegaan hoostaga Magaalada gaarisa ee Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Weerarkaan ayaa waxaa lagu qaadey Saldhig Ciidamo ka tirsan Booliska Kenya ku leeyihiin deegaanka Goorisa oo hoostaga Magaalada Gaarisa,waxaana la sheegay in dagaal kooban uu labada dhinac halkaasi ku dhexmaray.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay dagaalkaas dhex-maray Ciidamada ka tirsan Booliska Kenya iyo Xubno kamid ah Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo sheegtay Mas’uuliyadda weerarkaas ayaa waxaa ay sheegeen inay Gudaha u galeen Saldhiga ciidanka Kenya,isla markaana ay burburiyeen Agab Ciidan oo yaallay Saldhiga.
Saraakiisha Ciidanka Booliska Kenya ee Magaalada Garisa weli kama hadlin weerarkaas Xubno ka tirsn Al-Shababa ku qaadeen Saldhig ku yaalla duleedka Magaaladaas,waxaana horay u jirtay in weeraro kale laga fuliyey Gudaha dalkaas.
Si kastaba weerarkaan Xubno ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen Saldhig ay Ciidanka Kenya ku leeyihiin duleedka Gaarisa ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Mareykanka uu sheegay in uu duqeyn ku diley Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab iyo xaaskiisa,kuwaas oo abaabulay weerarkii lagu qaaday Saldhiga Ciidamada Mareykanka ee dalka Kenya.